Farafara amboarina ho an'ny alika Ireo ve no safidy tsara indrindra? Tombony, karazany ary maro hafa! | Tontolo alika
Alika alika avo
Mazava be izahay fa tena ilaina ny biby fiompy ambiny. Noho izany, manandrana foana izahay hanana ny toerana tsara indrindra, ny ahazoana aina indrindra sy ny toerana tsara indrindra ao an-tranonay. Noho izany, rehefa mieritreritra izany rehetra izany isika, dia teraka ny safidy hafa izay tsy azontsika lavina fa izany no izy ny fandriana amboarina ho an'ny alika.
Ho hitanao hoe iza izy ireo tombony lehibe ho an'ny biby fiompinao rehetra, ary koa ny karazany amin'ireny mba hahafahanao misafidy mifanaraka amin'ny zavatra ilainao. Fomba tonga lafatra sy tsy lafo mba hanomezana anao ny tsara indrindra hatrany amin'ny resaka fampiononana. Avelanao hankafy ny fandriana alika misandratra ve izy ireo?
1 Ny fandriana tsara alaina alika indrindra
2 Inona no atao hoe fandriana alain'ny alika
3 Karazana fandriana alika atsangana
3.3 Avy amin'ny hazo
3.4 Ary mbola hanohon
4 Tombony azo amin'ny fandriana atsangana
5 Aiza no hividianana fandriana alika atsangana
Ny fandriana tsara alaina alika indrindra
Mba hanampiana anao hisafidy, eto ambany ny safidin'ny farafara tsara alika indrindra ho an'ny alika izay ahitsinao 100%:
Amazon Basics - Fandriana ...
PawHut Natsangana fandriana ho an'ny...
Inona no atao hoe fandriana alain'ny alika
Araky ny anarany dia fandriana na toerana fitsaharana ho an'ny alika. Fa tsy eo amin'ny gorodona mivantana fa vita amin'ny tongotra efatra izay manohana ny fototry ny farafara. Eny, toy ny fandriana mahazatra fa ny habeny ho an'ireo volony.
Ity karazana fandriana ity dia manana haavo lava mifanaraka amin'ny biby fiompy foana mba tsy hiezahany mafy rehefa tonga eo amin'izy ireo. Ankoatr'izay, ny fotony dia mazàna miaina miaina ka ankoatry ny mahazo aina dia azo ampiharina kokoa noho ny safidy hafa ananantsika eny an-tsena.
Tery ny harato rehefa mandry izy ireo fa tsy mahazo aina fa ny mifanohitra amin'izay ihany, satria rehefa manamboatra dia misy malefaka ary mampahazo aina ilay alika.
Karazana fandriana alika atsangana
Mametraka lamba - fandriana ...
Ity dia iray amin'ireo safidy izay omentsika lanja voalohany indrindra ny mahita ny fihetsik'ireo biby fiompinay. Ny fandriana miakatra mora vidy dia tsy tokony ho ratsy kalitao. Androany dia hitantsika ny safidy manokana sy maharitra indrindra. Ny zavatra tsara indrindra dia ny manana rafitra mahatohitra azy mba tsy hisy ny mampatahotra ary miaraka amin'ny lamba fofonaina ho an'ny vokatra tsara.
Ny habe amin'ity tranga ity dia tena zava-dehibe satria tsy maintsy mifanaraka amin'ny biby fiompintsika ny fandriana. Noho izany, raha manana alika lehibe ianao dia tsy maintsy io koa no toeram-pialan-tsasatra misy azy. Saingy tsy tokony hatahotra ianao satria ny ankamaroan'ny maodely dia manana habe maro, izany dia mankasitraka ny fividianany. Mazava ho azy raha manana biby fiompy kely maromaro ianao dia afaka misafidy iray lehibe koa ka mitroka ao daholo izy ireo.
Sofa PawHut ho an'ny alika...
Ny famaranana hafa, ankoatry ny vy na plastika, dia hazo ihany koa. Tsy misy isalasalana, vita amin'ny hazo mafy, izay hahatonga fanoherana iray hafa amin'ireo teboka matanjaka. Fanovozan-kevitra lehibe ahazoana miloka amin'ny fiononana fa koa eo amin'ny lafiny haingon-trano. Inona koa, manome fitoniana be dia be ary tsy manadino fa ny hazo dia mety tsara amin'ny fitazonana hafanana ary tazomy ny hamandoana. Azo antoka fa safidy hafa tianao io!
PawHut Pet Bed ...
Lavorary izy ireo rehefa tsy maintsy atao mitsangatsangana miaraka amin'ny biby fiompy. Satria ity karazana fandriana itomboan'ny alika ity dia azo angonina ary atambatra ao anatin'ny fotoana fohy ary tsy mila toerana be loatra. Mazava kokoa noho izany matetika ny fitaovan'izy ireo nefa mbola mahazaka. Ny tongony dia azo aforitra toy ny seza boribory, hahafahana manangona azy ao anatin'ny segondra vitsy. Miaraka amin'ny tongotra tsy mitongilana apetraka amin'ny faritra rehetra ary koa, matetika dia mitondra kitapo izy ireo mba hahatonga ny hetsika hahafinaritra kokoa.
Ianao koa dia manana a habe kely kokoa ho an'ny biby fiompy kely kokoa. Na dia amin'ity tranga ity aza ianao dia afaka misafidy ireo famaranana samihafa satria ho hitanao io karazana habe io amin'ny fandriana hazo, vy ary harato. Tonga lafatra izy io satria hanampy ny fampiononana rehetra ilain'ny biby fiompy kely fialan-tsasatra tanteraka.
Amazon Basics - Cover ...
Samy afaka manana ny ampahany harato sy ny tongotra Vita ny PVC ary io koa dia fitaovana iray hafa izay afaka hitantsika amin'ny antsipiriany lehibe. Satria manome fanoherana izy ireo ary afaka miaina, dingana roa lehibe ahafahana mankafy ny faritra fitsaharana miaraka amin'ny fiononana lehibe.
Tombony azo amin'ny fandriana atsangana
Salama kokoa: na dia toa tsy toa izany aza, ny zava-misy hoe tsy mila matory amin'ny tany ianao fa amin'ny toerana avo be dia efa manatsara ny fahasalamanao. Koa satria manamaivana ny tsindry rehetra mety hipoitra manodidina ny tonon-taolana.
Hotazonin'izy ireo hatrany ny maripana marin-toerana. Izany dia ho fisafidianana ny fivezivezin'ny rivotra eo ambanin'ny farafara. Zavatra iray izay manampy ihany koa ny zava-misy fa noho io rivotra io dia hajanona ankolaka ny fofona ratsy.
Madio kokoa izy ireo ary io dia ny ahafahantsika manadio azy ireo amin'ny fomba tsotra kokoa ary tsy hanangona bakteria betsaka toy ny hafa izay mivantana mivantana amin'ny tany izy ireo.
Al afaka entina avy amin'ny toerana iray mankany amin'ny toerana hafa Amin'ny fomba tsotra, ny biby fiompinao dia hanana toerana hatoriana manokana foana. Na ao anaty na ivelan'ny trano.
Lavorary ho an'ny alika antitra na marary. Koa satria hitantsika teo fa hikarakara tanteraka ny vatanao sy ny tonon-taolanao izy io, fa io ihany koa no hanakanantsika azy ireo tsy hianika amin'ny toerana avo kokoa mety hanimba azy ireo.
Aiza no hividianana fandriana alika atsangana
Amazon: Amazon dia manana izay rehetra ilaintsika eo am-pelatanantsika. Izany no antony rehefa mitady fandriana amboarina ho an'ny alika dia mety tsy ho ambany. Mahita modely tsy misy farany ho an'ny alika lehibe kokoa sy kely kokoa isika. Saingy tsy izany ihany fa, amin'ny famaranana azy dia hanana ny zavatra rehetra hisafidianana ianao. Ho fanampin'ny anatiny na ivelany ary misy loko isan-karazany.
kiwiko: Ao Kiwoko dia hahita safidio fandriana alika tena manokana koa ianao. Satria amin'ity tranga ity mifantoka amin'ny loko sy ny lamina. Izy rehetra miaraka amina kalitao tsara sy vidiny izay mora indrindra ihany koa, noho izany dia mendrika ny mandray azy io. Tsy manadino ny cushion na sofa karazana.
Lidl: Ao Lidl dia mahita ny safidy tsara indrindra ho an'ny trano izahay ary izao koa ho an'ny biby fiompinay. Noho izany, mila mailo be ianao satria maodelin'ny fandriana namboarina ho an'ny alika izay miaraka amin'izay koa dia manana parasol, ka ho tonga lafatra ho an'ny ety ivelany. Tsy manadino ireo fandriana plush malefaka izay hitantsika ihany koa ao amin'ity magazay lehibe ity.
Carrefour: Ao amin'ny Carrefour dia afaka mahita modely samihafa tianao be koa ianao. Satria amin'ny lafiny iray dia hanana ireo izay misy tongony metaly sy faladiam-bolongana ianao, fa raha mila zavatra misy fomba kokoa handravahana ny zoron'ny tranonao ianao dia ho faly koa fandriana miaraka amin'ny tongony hazo ary koa fitoeran-damba sy foam. Tsy manadino ireo sofa ho an'ny alika izay ho hitanao amin'ny vidiny lafo.
Matetika: Tsy azontsika hadinoina ihany koa ity magazay ity satria ao no ahitantsika ireo safidy tena ilaina sy ilaina indrindra mba hahatsapan'ireo biby fiompintsika fa milay kokoa noho ny hatramin'izay izy ireo. Fampifangaroana ny loko, ny vita amin'ny vy ary ny lamba mifoka rivotra no ho sasany amin'ireo hevitra hotononina eto. Iza amin'izy ireo no miloka?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Fitaovana alika » Alika alika avo
Tavoahangy rano alika
Clicker ho an'ny alika